Gbasara Anyị | Ningbo Yongsheng ahịhịa Co., Ltd.
Ningbo YONGSHENG ahịhịa CO., LTD
ANY HAVE nwere ihe karịrị ụdị 500 dị iche iche. OURlọ ọrụ anyị nwere nnukwu ikike ịmepụta ngwaahịa na mmepụta anyị kwa afọ bụ 30,000,000 PC.OEM / ODM IWU A NA-anabata.
Ningbo YONGSHENG ahịhịa CO., LTD bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke pụrụ iche na-amị dị iche iche iche nke brushes, plastic ụlọ ịwụ ngwa na ịchọ mma enyo. Factorylọ ọrụ a dị na mgbago ugwu Ningbo City, dị nso na mpaghara Jiulong Lake Tourism Development Mpaghara.
Thelọ ọrụ ahụ na-ekpuchi ebe puku mita iri abụọ na abụọ na narị abụọ. Na elu equipments, nlezianya na oru oma management System. lt e jikọtara site Production, Quality nnyocha, Ahịa, Nka na ụzụ ihe ọkọnọ, nkwakọba, na ọhụrụ na ngwaahịa empolder kpamkpam isii kpọmkwem ngalaba. Iji ruo ihe mgbaru ọsọ dị ka "na-arụ ọrụ dị ka onye ndu ụlọ ọrụ", anyị na-ekepụta isi mmalite nke mmepe anyị, anyị na-agbanwe nghọta ọkachamara anyị, nke ọhụụ na nke ụlọ ọrụ iji sonyere n'ọhịa. Ugbu a, ndị ahịa anyị ga-ahụ "Mmekọrịta Win / Win" n'etiti ibe ha.
Ndi ISO9001 kwadoro site na 2003, ndi oru ihe omuma anyi na ndi 550 ndi nwere uchu na ndi Yongsheng, ndi oru aka anyi na oge ha ga - eweputa nkwa nke iwu gi. Igwe igwe igwe iri abụọ na isii, igwe nrụpụta igwe ise, igwe zọcha ọkụ atọ, ọkpọ ọkpọ isii, igwe echekwa anọ, igwe na-akwọ akpaka na akara ngwugwu isii. Ọzọkwa anyị nwere onwe anyị ebu mmepe otu nke mere na anyị nwere ike ịzụlite ọhụrụ ihe na gị ọnụ. Anyị na-ebupụ na mba niile n'okwu ahụ.USA, Europe, Japan, Middle East, South East… N'ezie ị nwere ike ịchọta ebumnuche gị na-achọsi ike. Anyị ji obi anyị niile na-akpọ gị ka ị sonyere anyị taa ma nwee olile anya na ihe anyị nwere ike ịbụ onye na-enye aka maka ọdịmma na ọganihu gị n'ọdịnihu. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe ọmụma banyere ngwaahịa anyị ma ọ bụ maka ajụjụ ọ bụla ọzọ!